Manchester United Oo Jabisay Sharcigii Sir Alex Ferguson & Ole Gunnar Solskjaer Oo Karaamadii Laga Qaaday - Laacib
Manchester United Oo Jabisay Sharcigii Sir Alex Ferguson & Ole Gunnar Solskjaer Oo Karaamadii Laga Qaaday
Manchester United ayaa jabisay sharci muhiim ah uu u dejiyay Sir Alex Ferguson oo ku aadanaa maqaamka xiddiga ugu sareeya kooxda iyo tababaraha.
Waxay tani xiriir la leedahay soo laabashada Cristiano Ronaldo, kaasoo noqday xiddiga ugu mushaharka badan kooxda islamarkaana ah shaqsiga ugu muhiimsan Old Trafford.
36 jirkaan ayaa United ku soo biiray dhamaadkii xagaaga isagoo ka soo wareegay Juventus ka dib 12 xilli ciyaareed uu ka maqnaa Manchester.
Xiddiga reer Portugal ayaa noqday ciyaaryahanka ugu mushaharka badan Premier League isagoo todobaadkii qaadanaya 510 kun ginni, waana mushahar gaaraya 26.5 milyan ginni sannadkii.
Tan iyo markii uu ku soo laabtay Red Devils, waxaa sarre u kacay taageerayaasha baraha bulshada ee kooxda, halka sidoo kale uu sarre u kacay maaliyad iibintooda dunida oo dhan.
Si kastaba, in Ronaldo uu si weyn uga mushahar sareeyo tababare Ole Gunnar Solskjaer waxay saameyn xun ku leeyahay tababaraha, iyadoo kooxda ay jabisay sharci uu dejiyay Sir Alex Ferguson.
Kaliya ma ahan in Ronaldo uu ka maqaam sareeyo tababarihiisa laakiin waxay sidoo kale cadaadiska ku kordhineysaa tababaraha reer Norway oo aan aheyn shaqsiga ugu muhiimsan Old Trafford.
Tababare Ferguson ayaa waqtigiisii United wuxuu dejiyay sharci ah in tababaraha uu noqdo shaqsiga ugu muhiimsan kooxda, isagoo ka sheekeeyay waqti uu diiday in Rooney uu qaato mushahar isaga ka sareeya.
Ferguson ayaa buugiisa Hogaaminta, farshaxanka tababarenimo, wuxuu ku qoray: “Waxaan u sheegay inaysan cadaalad aheyn in Rooney uu qaato labo jibaarka mushaharkeyga.”
Gudoomiyaha kooxda Joel Glazer ayaa yiri: “Waan kugu raacsanahay gabi ahaanba, laakiin maxaan sameynaa? Waa ay sahlaneyd. Waxaan kaliya isku raacnay inaan ciyaaryahan la siinin mushahar ka badan midkeyga.”
Mushaharka isbuuclaha ee 510ka kun ginni ee Ronaldo wuxuu qeyb ka yahay todob xiddig oo Manchester United ah – David De Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane, Paul Pogba, Edinson Cavani iyo Anthony Martial – oo qaata mushahar ka badan kan Solskjaer oo ah 200 kun ginni todobaadkii.